क्रूज नियन्त्रण कसरी प्रयोग गर्ने - Victor Mochere
क्रूज कन्ट्रोल एक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली हो जसले तपाइँलाई एक विशिष्ट गतिमा सवारी साधनको एक्सेलेटर ठीक गर्न सक्षम बनाउँछ, त्यसैले तपाइँ आफ्नो खुट्टा पेडलबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। यो मूलतया अटो-पाइलट मा ड्राइभिङ को एक रूप हो। क्रुज कन्ट्रोल ए-रोड र मोटरवेहरूमा प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको छ जसमा बारम्बार स्टपहरू र वार्तालाप गर्न मोडहरू हुँदैनन्। एक समयमा यो केवल उच्च-अन्त लक्जरी कारहरूमा पाइन्छ, तर अब साना शहर कारहरूमा पनि यो प्राय: फिट हुन्छ।
तपाईले गाडी चलाउँदा बटन थिचेर यो सक्रिय हुन्छ। मुख्य नियन्त्रणहरू 'अन/अफ', 'सेट', 'रद्द गर्नुहोस्' र 'रिजुम' हुन्। आधुनिक-दिनको क्रूज नियन्त्रणको आविष्कार 1948 मा अन्धा अमेरिकी मेकानिकल इन्जिनियर राल्फ टिटोरले गरेका थिए, यद्यपि गति नियन्त्रणको जरा 18 औं शताब्दीमा छ जब यसलाई स्टीम इन्जिनहरू विनियमित गर्न प्रयोग गरिएको थियो।
कसरी क्रूज नियन्त्रण सेट गर्ने
के क्रूज नियन्त्रणले इन्धन बचत गर्छ?
तपाईंले क्रूज नियन्त्रण कहिले प्रयोग गर्नुपर्दैन?
अनुकूली क्रूज नियन्त्रण के हो?
सवारी साधनको प्रत्येक मोडेलमा क्रूज नियन्त्रण अलि फरक हुन्छ, तर धेरैजसो प्रणालीहरूले धेरै समान तरिकाले काम गर्छन्। क्रूज सुरु गर्न यी5चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
आफ्नो गति निर्माण गर्नुहोस् - क्रुज कन्ट्रोल कम्तिमा 30 माइल प्रति घण्टाको स्थिर गतिमा निरन्तर नरोकिइकन ड्राइभ गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो, त्यसैले यो राजमार्ग वा दोहोरो क्यारिजवेको लागि उपयुक्त छ।
क्रूज नियन्त्रणमा स्विच गर्नुहोस् - एकचोटि तपाईंले आफ्नो इच्छित गतिमा पुग्नुभयो (यो गति सीमा भित्र छ भनेर सुनिश्चित गर्दै), क्रूज नियन्त्रण प्रणाली खोल्नुहोस्। धेरैजसो सवारी साधनहरूमा, यसलाई नियन्त्रण गर्ने बटनहरू स्टेयरिङ ह्वीलमा वा पछाडि देखिन्छन्, र यो अन गरेपछि तपाईंको ड्यासबोर्डमा लाइट देखा पर्नेछ। पहिलो पटक क्रूज कन्ट्रोल प्रयोग गर्नु अघि, आफ्नो ह्यान्डबुक जाँच गर्नुहोस् र बटनहरू पत्ता लगाउनुहोस् ताकि तपाईं सडकमा हुँदा तिनीहरूलाई फेला पार्ने प्रयास गर्दैनन् - जुन स्पष्ट रूपमा खतरनाक छ।
क्रूज नियन्त्रण सेट गर्नुहोस् - एकचोटि तपाईंले प्रणाली स्विच गर्नुभयो, सेट बटन थिच्नुहोस्। यसले हालको गति होल्ड गर्न तपाईंको कारसँग सञ्चार गर्नेछ। धेरैजसो सवारी साधनहरूमा, यसले ड्यासबोर्ड सूचकलाई हरियो बनाउँछ। क्रुज कन्ट्रोल सेट गरिसकेपछि, तपाईले आफ्नो खुट्टालाई एक्सेलेटरबाट हटाउन सक्नुहुन्छ र कारले आफ्नो गति कायम राख्नुपर्छ
गति बढाउन - धेरै कारहरूमा या त 'अप' एरो वा '+' बटन हुन्छ जसले तपाईंलाई कारको गति बढाउन अनुमति दिन्छ। एक्सेलेटर पेडल थिच्दा सामान्यतया प्रणाली ओभरराइड हुनेछ
सुस्त बनाउन - या त तल एरो ट्याप गर्नुहोस् वा क्रूज नियन्त्रण प्रणालीमा '-' बटन, वा ब्रेक लागू गर्नुहोस्। सुरक्षा कारणहरूका लागि, ब्रेक लागू हुने बित्तिकै क्रूज नियन्त्रण निष्क्रिय हुनेछ।
अन्य प्रकार्यहरू - 'रद्द गर्नुहोस्' बटनले क्रूज नियन्त्रणलाई पज गर्छ, तपाईंलाई प्रणाली पूर्ण रूपमा स्विच अफ नगरिकन फेरि पूर्ण नियन्त्रण दिन्छ। यसले तपाईंले क्रूज गर्न रोजेको गति कायम राख्नुपर्छ। यदि तपाइँ तपाइँको पहिले प्रोग्राम गरिएको गतिमा फर्कन चाहनुहुन्छ भने, 'रिजुम' थिच्नुहोस्।
क्रूज कन्ट्रोलको प्राथमिक कार्य भनेको ड्राइभिङलाई अझ सहज बनाउनु हो, तर एक्सेलेरेशन र मन्दीलाई सहज बनाएर तपाईंले इन्धन पनि बचत गर्न सक्नुहुन्छ। हामी मध्ये धेरैले स्वीकार गर्नेछौं कि हामी सडकमा, मोटरवेमा पनि स्थिर गति कायम राख्नमा धेरै एकरूप छैनौं। निरन्तर गति र ब्रेकिङले निश्चित गति कायम राख्नु भन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी इन्धन प्रयोग गर्नेछ।
50 mph को सट्टा 70 mph को स्थिर गतिमा ड्राइभिङले इन्धन अर्थव्यवस्थालाई 25% ले सुधार गर्न सक्छ। थप रूपमा, गति सीमामा तपाईंको क्रूज नियन्त्रण सेट गर्नाले तपाईंलाई गतिको जरिवानाबाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ। यो आजको ड्राइभिङ मौसममा विशेष गरी उपयोगी हुन सक्छ किनकि औसत-गति क्यामेराहरू बढ्दो सामान्य हुँदै गइरहेका छन्।
जबकि क्रूज नियन्त्रण धेरै फाइदाहरू छन्, त्यहाँ समयहरू छन् जब यो प्रयोग गर्न सुरक्षित छैन। क्रूज नियन्त्रणबाट बच्नुहोस्:
भारी ट्राफिकमा, घुमाउरो सडकमा, डाउनहिलमा जाँदा र पुलमा पुग्दा। सामान्यतया, जब पनि एक स्थिर गति अव्यावहारिक छ
चिप्लो सडकहरूमा - जसमा हिउँ, बरफ, भारी वर्षा र असिना पर्छ - किनकि यसले चिप्लिने सम्भावना बढाउँछ
राति अबेर वा जब तपाईं थकित महसुस गर्नुहुन्छ। क्रूज नियन्त्रण चाँडै स्नुज नियन्त्रण हुन सक्छ। तपाईंले आफ्नो खुट्टा एक्सेलेटरमा राख्न नपर्ने हुनाले, टाउको बन्द गर्न सजिलो छ – र आफ्नो गाडीको नियन्त्रण गुमाउनुहोस्
आजका केही कारहरू एडप्टिभ क्रूज कन्ट्रोल (ACC) ले सुसज्जित छन्। अनुकूली क्रूज नियन्त्रण एक अधिक उन्नत प्रविधि हो जसले तपाइँलाई निश्चित गति सेट गर्न सक्षम बनाउँछ जबकि प्रणालीले स्वचालित रूपमा अगाडि ट्राफिक पढ्छ र तपाइँको कारलाई सुरक्षित निम्न दूरीमा राख्छ। यसले कारको अगाडि माउन्ट गरिएका रडार सेन्सरहरू प्रयोग गरेर यो गर्छ ताकि तपाईंको गति अगाडिको गाडीसँग मेल खान्छ।
जब प्रणालीले कार अगाडिको दूरीमा परिवर्तन महसुस गर्छ, यसले स्वचालित रूपमा ब्रेक वा गति बढाउनेछ जुन तपाईंले पहिले सेट गर्नुभएको क्रुजिङ गतिलाई कायम राख्नको लागि। चलाख वा के? यदि अगाडिको कार अचानक गति बन्द हुन्छ, तथापि, तपाईंको कारले यसलाई नियमित रूपमा पछ्याउँदैन। यसको सट्टा, ACC प्रणालीले पूर्व-सेट गतिलाई तपाईंले परिवर्तन नगरेसम्म वा अर्को सवारीसाधनमा नआएसम्म कायम राख्छ।